Nhau - Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa laser engra?
Ndezvipi The Zvinhu Kuti Kanganisa Laser achiita zvokutemera?
Lasers inogona kuita mhando zhinji dzekugadzira. Senge pamusoro pekupisa kurapwa kwezvinhu, kutenderera, kucheka, kubaya, kuveza uye micromachining. CNC laser yekuveza muchina kugadzira zvinhu: organic bhodhi, jira, bepa, dehwe, rabha, rinorema bhodhi, compact ndiro, furo donje, girazi, plastiki, uye zvimwe zvisiri zvesimbi zvinhu. CNC laser yekunyora machining tekinoroji yave ichishandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji senge michina indasitiri, indasitiri yemagetsi, dziviriro yenyika uye hupenyu hwevanhu. Ndezvipi zvinhu zvakakosha zvinokanganisa CNC laser engraving muchina?
Iko kune kunyanya zvinotevera zvinhu zvitanhatu:
1. Kufuridzira kwesimba rekuburitsa uye nguva yeiradiation
Iyo laser yekuburitsa simba yakakura, iyo yekuvhenekesa nguva ndeyakareba, iyo laser simba yakawanikwa neiyo workpiece yakakura.When iyo tarisiro yakagadzika pamusoro peiyo peiyo workpiece, iyo yakakura kuburitsa laser simba iri, yakakura uye yakadzika gomba rakavezwa. iri, uye taper idiki.
2. Kufurira kwekutarisa kureba uye kusiyanisa Angle
Iyo laser danda ine diki divergence Angle inogona kuwana diki nzvimbo uye yakakwira simba kuwanda pane yakatarisa ndege mushure mekupfuura nepakati pekutarisa lens ine ipfupi yakakosha kureba. Iyo diki iyo dhayamita pane yakatarisa pamusoro, iyo yakanakisa chigadzirwa chinogona kuvezwa.
3. Kufuridzirwa kwenzvimbo yekutarisa
Nzvimbo yekutarisisa ine pesvedzero huru pachimiro nekudzika kwegomba rakagadzirwa nebasa rakavezwa. Kana nzvimbo yekutarisisa yakadzikira kwazvo, nzvimbo yechiedza penzvimbo yebasa yakakura kwazvo, iyo isingogadziri chete bhero muromo, asi zvakare inokanganisa kudzika kwekugadzirisa nekuda kwesimba rekuda simba. Sezvo kutarisisa kuchikura, kudzika kwegomba kunowedzera.Kana iko kukwirira kuri kwakanyanya, zvakare mune yekushandira pevhu mwenje nzvimbo yakakura uye yakakura nzvimbo yekukukurwa, isina kudzika kamwechete kudzika. Naizvozvo, iko kutarisisa kunofanirwa kuchinjiswa zvinoenderana nezvinodiwa pabasa rekuita.
4. Kufuridzirwa kwekugoverwa kwesimba mukati mepo
Iko kusimba kweiyo laser danda inosiyana nzvimbo nenzvimbo munzvimbo yakatarisa. Simba rinogoverwa zvakaenzana pane iyo micro axis yekutarisa, uye maburi anoburitswa nedanda akaenzana. Zvikasadaro, iyo grooves mushure mekuveza haina kuenzana.
5. Kufuridzirwa kwehuwandu hwehuwandu
Kudzika kwemachina kuri kanokwana kuita shanu paburi rehupamhi, uye taper iri hombe.Kana iyo laser ichishandiswa kanoverengeka, kwete chete kudzika kunogona kuwedzerwa zvakanyanya, iyo taper inogona kuderedzwa, uye upamhi hwacho hwakafanana .
6.Kufuridzirwa kwezvinhu zvekushandira
Nekuda kwesimba rakasiyana rekutsvagisa simba kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekushandira, hazvigoneke kutora rese laser simba rakaunganidzwa pane yekushandira kuburikidza nelenzi, uye chikamu chakakura chesimba chinoratidzwa kana kuratidzwa uye kupararira. Chiyero chekutora chakanangana nekutora kwekutora kwezvinhu zvekushandira uye iyo laser wavelength.